The Certificate Course in Advanced Diplomatic Skills (ADS – 4/2016) was concluded at the Ministry of Foreign Affairs – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Certificate Course in Advanced Diplomatic Skills (ADS – 4/2016) was concluded at the Ministry of Foreign Affairs
U Kyaw Zeya, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, deliveredaclosing remark at the Graduation Ceremony of the Certificate Course in Advanced Diplomatic Skills – ADS (4/2016) held at the LawKaNat Hall of the Ministry, at 03:00 pm today.
At the occasion, Directors-Generals, Deputy Directors-Generals and responsible officials from the Ministry and fifty trainees were attended.
This course comprised the prevailing issues and subjects relating to diplomacy, international relations, international law, economy, general knowledge and some of these subjects were conducted in condition of simulated exercises. And the duration of the course was seven weeks.
Ministry of Foreign Affairs is carrying out its duties in enhancing capacity of private and public sectors by conducting the advanced and basic diplomatic trainings. With this objective,the Certificate Course in Advanced Diplomatic Skills (ADS) is conducted and targeted for graduates of the Certificate Course in Basic Diplomatic Skills (BDS).
အဆင့်မြင့် သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၆)၏သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
အဆင့်မြင့်သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၆)၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ညနေ(၁၅း၀၀)တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန(နေပြည်တော်)ရှိလောကနတ် ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးကျော်ဇေယျမှ တက်ရောက်၍ သင်တန်းဆင်းအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ(၅၀)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
သင်တန်းတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေသော သံတမန်ရေးရာဘာသာရပ်များ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘာသာရပ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဘာသာရပ်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှင့် အထွေထွေဗဟုသုတဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို စာတွေ့ လက်တွေ့သင်ကြား ပို့ချခဲ့ပြီး သင်တန်းကာလမှာရက်သတ္တ(၇)ပါတ် ကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သံတမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများကို ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပြီး ပြင်ပ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများ၏ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ မြှင့်တင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ အဆင့်မြင့်သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများကို အခြေခံသံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးနောက် သံတမန်ရေးရာ ဘာသာရပ်များကို ပိုမို လေ့လာလိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၂ရက်။